လက်ကား XJC-Y02-3M ချုံ့အင်အားထုတ်လုပ်စက်နှင့်စက်ရုံ XJCSENSOR
1. XJCSENSOR တိကျမှန်ကန်မှုကိုလူတန်းစား: 0.2
2. ဖိအားအမျိုးအစား, မြင့်မားသောပြောင်းလဲနေသောတုံ့ပြန်မှု
4. ပစ္စည်း: သံမဏိ 17-4PH
5. ချုံ့ဝန်, အဆင်ပြေပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တပ်ဆင်;
ကြမ်းတမ်းသောပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့်လုံခြုံစိတ်ချရသောပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောဆဲလ်၊ တက်ကြွသောတုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှုန်း
၇။ Load Button Load Cell သည်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသည်။ ၎င်းသည်± 0.2% ၏ nonlinearity ရှိပါတယ်။ စံသတ်မှတ်ထားသော XJC-Y02-3M Load Button Load Cell ကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီစေရန်ပြုပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ပြီးအများစုမှာကျွန်ုပ်တို့၏စာရင်းထဲတွင်ရှိနေပြီး၎င်းတို့ကို ၂၄ နာရီတင်ပို့ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Load Cell ခလုတ်သည်အမျိုးမျိုးသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့်အရွယ်အစား၊ မြင့်မားသောတိကျမှု၊ မြင့်မားသောရွေ့လျားမှုတုံ့ပြန်မှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ကောင်းမွန်သောအပူချိန်လက္ခဏာများ၏အားသာချက်များနှင့်အတူဖိအားကိုတိုင်းတာရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
ဤပုံစံကို SZ, CN တွင်ထုတ်လုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ Load Cell ထုတ်ကုန်တစ်ခုလုံးနှင့်ဆင်တူသည်။ သတ္တုပါးသတ္တဝါ strain gauge နည်းပညာကိုအသုံးပြုသည်။ အပိုဆောင်းဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ cable ကိုပေါ်ဆွဲထံမှအများကြီးပိုမိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပေး strain ကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအသုံးပြုခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
XJCSENSOR သည်မြင့်မားသောစွမ်းရည်ချုံ့ခြင်း application များအတွက်ဒီဇိုင်းလုပ်သော Canister Load Cells (Column Load Cell ဟုလည်းခေါ်သည်) ၏ကျယ်ပြန့်သောပမာဏကိုပေးသည်။
အဆိုပါမော်ဒယ်များသည် ၀.၀၂ မှ ၁၂၀ ကီလိုမီတာအထိစွမ်းရည်ရှိသောကြံ့ခိုင်သောတည်ဆောက်မှုကိုပေးသည်။
ဝန်ဆဲလ်ဒီဇိုင်းသည်မာကြောသောအမြှေးပါးနိယာမကိုအခြေခံသည်။ ၎င်း၏မြင့်မားသောတောင့်တင်းမှုကြောင့် XJC-Y ကိုမြန်သောအင်အားသုံးတိုင်းတာမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါ strain gauge နိယာမလည်းငြိမ်တိုင်းတာခွင့်ပြုပါတယ်။ အနည်းဆုံးအရွယ်အစားရှိသော်လည်းအာရုံခံကိရိယာသည်တိကျမှန်ကန်မှုရှိသည်။ Button load cell casing သည်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုသည်။
ရှေ့သို့ XJC-Y01-13-A ဝန်အင်အားသုံး Transducer (0-1KN)
နောက်တစ်ခု: XJC-Y03-4M ချုံ့ Load ဆဲလ်
XJC-Y01-13 ခလုတ်ဝန်အင်အားအာရုံခံကိရိယာ (0-1KN)